iTunes USA Account — MYSTERY ZILLION
iTunes USA Account
June 2012 edited June 2012 in Help Desk
iTunes အတွက် US account ဖွင့်လို့ ရမရသိချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် စမ်းကြည့်တာကတော့ apple ကနေပြီး IP စစ်တယ်ထင်တယ်။ US IP မဟုတ်ရင် account ဖွင့်လို့မရပဲ contact itune support ဆိုတာပဲ ပေါ်နေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ Gift card အသုံးပြုပြီး redeem လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် US account ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ လုပ်လို့ရနိုင်မလား? နည်းလမ်းလေးတွေ သိချင်ပါတယ်။ ^:)^ 8-|
I readadiscussion https://discussions.apple.com/thread/2708285?start=0&tstart=0
not only Myanmar people. Some people also haveasame problem.
First , try to contact iTunes support.
I am finding the solution and let you know when I solved the problem.
http://www.apple.com/support/itunes/contact/ - click on Express Lane, then iTunes > iTunes Store
- go to itune store
- sign in with your account and go to account info
- scroll down and click "reset all warnings for buying and downloading"
လောလောဆည်တော့ စမ်းကြည့်အုံးမယ် ကိုစေတန်။
ရန်ကုန်မှာ Gift Cards တွေ ဝယ်ထားပြီး သုံးမရဖြစ်နေလို့။ 8-|
အရင်ကတော့ http://support.apple.com/kb/HT2534 မှာ ပြောတဲ့အတိုင်း iphone ကနေ လုပ်တာ ရပါတယ်။ ရရမှာပါ၊ ပြန်စမ်းကြည့်ပါဦး။
အင်း . ဟုတ်တယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ရတယ်အစ်ကို။ နောက်ပိုင်း apple က ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ IPAddress ပါစစ်တယ်ထင်တယ်။ မရတော့ဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ကလိကြည့်နေတုန်းပဲ။ ( account lock ကျမသွားဖို့ပဲ ဆုတောင်းရမယ် )
ဒါနဲ့ စကားမစပ် GiftCards တွေကို US မဟုတ်ပဲ တခြား နိုင်ငံတွေကနေကော အသုံးပြုလို့ရနိုင်မလား?
Gift card က နိုင်ငံနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ US Store ကနေ ဝယ်ထားရင်တော့ US မှာပဲ သုံးလို့ရပါတယ်။
Australia Store ကနေ ဝင်ထားရင်တော့ Australia account မှာပဲ သုံးလို့ရပါတယ်။
Singapore ကတော့ Gift card ရောင်းတာ မရှိသေးပါဘူး။
ဒါဆို မြန်မာနိုင်ငံကဆိုရင် ... အင်း .... ရပြီ ကိုစေတန်ရေ။ ကျေးဇူးပဲ။ )
နောက်မှ အသိရှိရင် အကောင့်ကို US change ခိုင်းလိုက်တော့မယ်။
Gift Card ကဝယ်ထားပြီးသားဆိုရင် Register လုပ်တဲ့အခါ None ရွေးပြီး တစ်ခါတည်း Redeem လုပ်ကြည့်ပါလား။
iTune use proxy setting from IE. so, I use ultrasurf to change IE proxy n
I can create iTune account with none from iTune at window pc. no need to redeem.
Can we create US account by using ultrasurf?